Shabdashikha प्रगतिशील लेखक संघ भारतको सत्रौं राष्ट्रिय सम्मेलन |
प्रगतिशील लेखक संघ भारतको सत्रौं राष्ट्रिय सम्मेलन
| 231 Views | Published Date : 14th September 2019 |
प्रगतिशील लेखक संघ भारतको सत्रौं राष्ट्रिय सम्मेलन जयपुरमा सुरु भएको छ । जहाँ देशभरिबाट आएका लेखक, साहित्यकारहरुको सहभागिता रहेको छ । उद्घाटन सत्रको सञ्चालन गर्दै सम्मलेलनका संयोजक तथा प्रलेसं राजेस्थानका महासचिव ईश मधु तलवारले बताए कि ३७ वर्ष पहिले सम्मेलन जयपुरको यही रवीन्द्र मञ्चमा भएको थियो । त्यस समय यतिखेरका महासचिव राजेन्द्र राजन र अध्यक्ष मण्डलका सदस्य सुखदेवसिंह सिरसा पनि सामेल थिए जो यतिखेर पनि सहभागी छन् ।
साहित्य, संस्कृति र अभिव्यक्तिका विविध रुपहरुले युक्त सुन्दर विहान जसको शुभारम्भ साँस्कृतिक मार्चबाट गरियो । प्रगतिशील लेखक संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष पुन्निलनद्वारा संगठनको ध्वजारोहणपश्चात कार्यक्रमको सुरुवात गरियो । देशभरिका २६ प्रदेशहरुबाट ६०० लेखकहरुले भाग लिएको सो सम्मेलन तीन दिनसम्म चल्नेछ ।
चिन्तक र भाषाविद् गणेश एन देवीले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै भने कि यस समय हामी सबैको काँधमाथि भाषा र अभिव्यक्तिलाई वचाएर राख्ने दायित्व छ । अब यो समय आइसकेको छ कि समान विचारधाराका सबै लेखक तथा गैह्र लेखक संगठनहरु मिलेर यो आवाज उठाउनुपर्ने छ कि हामी दुनिया बदल्न चाहन्छौं । राजेस्थान प्रलेसका अध्यक्ष रितुराजले ३७ वर्षपश्चात जयपुरमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना हुनु एउटा ठूलो परिघटना भएको बताए । लेखकीय कार्यलाई एउटा महत्वपूर्ण कार्य बताउँदै उनले भने कि लेखक हुनु एक कठीकन संघर्ष हो । विपरित परिस्थितिहरुमा पनि भाषालाई बचाइराख्नु, प्रलोभनहरुबाट टाढा रहनु तथा प्रतिरोधको एउटा नयाँ जमिन तयार गर्नु एक प्रगतिशील लेखकको दायित्व भएको बताए ।
प्रगतिशील लेखक संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष पुन्नीलनले भने कि वर्तमान समयमा देशमा धर्मनिरपेक्षता बचेको छैन । देशमा जुनप्रकारको हिन्दुवादी विचारधारा चलिरहेको छ, त्यो आफ्नो समयको लागि विनाशकारी छ । यसप्रकारको फासीवादलाई रोक्न जरुरी छ । साथै उनले रचनाकर्मीहरुसँग यो अपील गरे कि उनीहरु आफ्ना कविता, कथा र रचनाहरुमार्फत यस कुराको विरोध गरुन् । प्रलेशका सदस्य सचिव संजय श्रीवास्तवले लेखक तथा संस्कृतिकर्मीहरुको निधनमाथि शोक प्रस्ताव राखे र सहभागीहरुद्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरियो । प्रलेसका राष्ट्रिय महासचिव राजेन्द्र राजनले भने कि यस समयमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा बढिरहेको छ, जहाँ कैयौं लेखक तथा पत्रकारहरुको हत्या समेत गरिएको छ । विचारकहरुलाई शहरी नक्सलीको आरोपमा गिरफ्तार गरिंदैछ । समय आइसकेको छ कि लेखकहरु एकान्तवासबाट बाहिर आएर सर्वजनिक मंचमा आफ्ना कुराहरु राख्नलाई । सुखदेवसिंह सिरसाले आफ्ना विचार राख्दै भने कि वर्तमान समयमा लेखकहरुलाई प्रतिबन्ध लगाइदै छ । रचनाकारहरुलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उपलब्ध छैन ।
त्यसैगरि पुनम सिंहले भनिन् कि साहित्य तथा शब्दहरुको मशाल नै हो, जसले असंख्य मौनताहरुलाई तोड्न सक्छ । साथै उनले लेखहरुलाइ यस समयमा शाहसी र एकजुट हुनको लागि अपिल गरिन् । लोप्रिय रंगकर्मी तथा कलाकार रमा पाण्डे ले लेखकहरुले जनतासँग संवाद गर्नको लागि आग्रह गरिन । उनले यो पनि थपिन कि यतिखेर युवाहरुसँग संवाद गर्नुपर्ने धेरै आवश्यकता छ ।
उद्घाटन सत्रको संचालन सम्मेलनका राष्ट्रिय संयोजक राजेस्थान प्रगतिशील लेखक संघका महासचिव ईश मधु तलवारले गरे । उनले भने कि जयपुरमा ३७ साल पश्चात इतिहास दोहरिइहको छ । यस सम्मेलनमा तमिल तेलुगु कन्नड मलयालम, मराठी, बंगाली, गुजराती, उडीया, असमीया, डोगरी मैथिली, भोजपुरी, पंजावी, राजस्थानी आदि विभिन्न भाषाका लेखकहरुको सहभागिताबाट भारतीय भाषाहरुको एक रोचक संगम लेखकहरुको यस सम्मेलनमा देखिएको छ । सत्रको अन्त्यमा लेखक संघका सदस्य सचिव प्रेमचन्द गान्धीले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । भाद्र २७ गते सुरु भएको सम्मेलन २८ गतेसम्म चल्नेछ ।
SelectaMonth Click to Select March 2020 September 2019 August 2019 April 2018 March 2018 January 2018 April 2017 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014
SelectaCategory Click to Select Ads-full-below Ads-middle Audio Video कथा कला–संस्कृति कविता कुराकानी निबन्ध फोटो फिचर बहस ब्रेकिङ विज्ञापन शैली समाचार समीक्षा संस्मरण
जीविका ‘अश्रु’का तीन गजल
निलय उपाध्यायका तीन कविता
निशान्तका दुई कविताहरु
प्रमोद धितालका सात कविताहरु
सुशांत सुप्रियका कविताहरु
मृत्यु संस्कारबारे केही कुरा
के दाशत्व र प्रेम एउटै हो ?
तिज कस्को हो ?
गजल ग‌ंगा । रेडियो नेपाल
ऋतु हेर्ने यो नजरको||NAZAR-2
Email : shabdashikha1@gmail.com
Web : wwww.shabdashikha.com
© 2015, ↑ Shabdashikha
Log in-	Posts - Add New - Powered by CIT Nepal - Dgn by Chandra Shrestha